Uru dị elu nke 7 nke Semax I Kwesịrị Knowmara Tupu Jiri - Phcoker
1. Gịnị bụ Semax Peptide?
2. Ngwa Semax
3. Uru Semax
4. Kedu ka Semax si arụ ọrụ?
5. Kedụ ka m ga-eji Semax?
6. Ọ nwere mmetụta ọ bụla dị na ya mgbe ị na-eji Semax?
7. Shouldkwesịrị iji oghere Semax mgbe ị na-eji?
8. Kedu ihe dị iche na Semax vs Selank?
9. Ebee ka m nwere ike inweta Semax n'ịntanetị?
Semax mepụtara na 1980s na 90s, emesịa kwadoro nke ọma na Russia maka ọgwụgwọ nke ndị ọria gburu, mmerụ ụbụrụ na nbibi nke ọgụgụ isi. Na Semax peptide agbadoro n'ọmụmụ ihe mmadụ dị iche iche na Russia, o gosipụtakwala iji nwekwuo njiri mara.
N’aka nke ozo, enwere otutu ihe nlebara anya nke achoro acho nke ogwu a nwere ike inye aka n'ibelata nchegbu ma meziwanye onodu onye oru. A na-eji Semax eme ihe dịka ọkọlọtọ nootropic, mana o nwekwara ọrụ ndị ọzọ dị ka ịkwalite ahụike ụbụrụ yana n'ịkwalite sistemụ mgbochi n'etiti ọrụ ndị ọzọ. Enwere ike ịchọta uru Semax nwere naanị mgbe ewere ọgwụ ahụ n'ụzọ ziri ezi. Agbanyeghị, jide n'aka na ị ga-enweta nduzi ojiji nke dọkịta gị maka nsonaazụ na ahụmịhe kachasị mma.
Semax (80714-61-0) bụ ọgwụ peptide mepụtara na Russia na 1980s iji nyere aka n'ịgwọ na njikwa nke nsogbu dịka ọrịa strok. Taa, edepụtara Semax na ndepụta Russia nke ọgwụ ndị dị mkpa mgbe egosịrị na arụmọrụ ya na-emeso ọnọdụ ahụike dị iche iche.
Ndị dọkịta dekwara Semax dị ka ọgwụ nootropic mgbe ọ matachara na ọ nwekwara ike ịrụ ọrụ dị mkpa iji melite arụmọrụ ebe nchekwa yana belata nchekasị. Ọ bụ ezie na Russia na Ukraine akwadoro iji ọgwụ a, mba ndị ọzọ dị ka United States of America na-anabataghị ya n'agbanyeghị na-egosi oke mkpa na ọgwụgwọ nke ọnọdụ ahụike dị iche iche. Agbanyeghị, nke ahụ anaghị egbochi gị iji Semax ntụ ntụ.
Ewezuga ọkọlọtọ Semax ntụ ntụ, enwerekwa ọdịiche abụọ dị na ahịa, mana ọ fọrọ nke nta ka ha rụọ ọrụ n'otu ụzọ ahụ. Ha gụnyere Na-Semax-Amidate na N-Acetyl. Ka ọ dị ugbu a, enweghị nnukwu ọmụmụ ihe duziri ma ọ bụ edepụtara banyere ụdị Semax abụọ ahụ. Agbanyeghị, site na nyocha Semax, ụfọdụ ndị ọrụ na-akọ na Na-Semax-Amidate nwere ike maka ịkwalite elekwasị anya ebe N-Acetyl Semax na-enyekwu ume. Nsonaazụ Semax nwere ike ịdị iche site n'otu onye gaa na nke ọzọ, dabere n'ot'aka ahụ si anabata usoro a chọrọ. I nweere onwe gi inyocha otu ụdị Semax ma jide n'aka na ị na-etinye dọkịta gị na usoro usoro ọgwụgwọ niile.
The Semax ntụ ntụ dị n’ụlọ ahịa dị iche iche dị na ntanetị na anụ ahụ gbara gị gburugburu ebe ị nwere ike ịme iwu gị oge ọ bụla. Nweta Semax maka onu ahia site na onye ahia ma obu onye n’ere ahia nwere ike iru. Ọ bụghị ndị ọ bụla na-ere ọgwụ na-ere ngwaahịa dị mma, ọ dịkwa mma mgbe niile ịmụ akwụkwọ ndị ahịa Semax tupu ịmee iwu gị. Ghọta otu ụlọ ahịa si arụ ọrụ na ogologo oge ọ ga-ewe tupu ịnweta Semax gị (80714-61-0).
Ọ dịkwa mma ịga maka nyocha ahụike tupu ịmalite ị thisụ ọgwụ a. Semax maka ọrịre bụ ọgwụ ọgwụ, yabụ, dọkịta gị kwesịrị ịbụ onye kwesịrị ịdo gị usoro ịchọrọ ịche ị nyochachara ọnọdụ gị. Ọ dịkwa mkpa ka onye ọrụ ahụike nyocha ya usoro ọgwụgwọ ahụ maka nsonaazụ kacha mma.
Mgbe ịzụrụ Semax (80714-61-0), chekwaa ya ka ụmụ aka ghara iru na nju oyi ebe ọ nwere ike mebie dị ka peptides ndị ọzọ. Maka ọdị mma, ahụmịhe Semax, hụ na ị na-agbaso ntuziaka usoro usoro ọgwụgwọ niile. Ekwela mgbe ịhazi usoro onunu ogwu n’agwaghị dọkịta gị.
Dịka m kwuru na mbụ, Semax peptide abụrụla ihe dị mkpa na ahụike, ọkachasị na ọgwụgwọ nke ọnọdụ dị iche iche. Na Russia, akwadoro ọgwụ ahụ mgbe ọ matachara na ọ nwere ike inye aka n'ịchịkwa nsogbu mgbasa dịka ọrịa ọnya. Agbanyeghị, ọmụmụ Semax mụụrụ kemgbe ọtụtụ afọ ekpugheala ọrịa ndị ọzọ ọgwụ nwere ike ịgwọ ọfụma.
Mba dị iche iche ma ọ bụ ndị dọkịta na-eji Semax agwọ ọrịa ọnọdụ dị iche iche. A na-etinye nchegbu Semax intranasally, mana ọ bụ sọsọ dị iche dabere na ọnọdụ ahụike dị n'okpuru ọgwụgwọ. E nwekwara ụdị Semax injectable nke kwesịrị ka onye ọkachamara ahụike nye ya. Na-echeta mgbe nile ịchekwa ọgwụ na friji.
Semax bu ihe nootropic gosiputara na o bara ezigbo uru n’inyere ụbụrụ gị aka n’ụzọ dị iche iche. Ebe ọ bụ na akwadoro Semax maka iji ọgwụ eme ihe na 2011, ejirila ọgwụ ahụ gwọọ ọnọdụ ahụike dị iche iche. Mgbe ejiri ya n'ụzọ ziri ezi, ọgwụ ahụ nwere ike ịnapụta uru ndị a;
1. Ọkachasị ADpat Symbol
Semax nwere mmetụta na-enyere aka n'ịgwọ ọrịa ADHD. Akwukwo ogwu gosiputara na Semax meziwanye ebe nchekwa na iwelie neurotransmitters, nke odi ala karie ndi mmadu nwere ADHD. Ugbu a, Semax bụ usoro ọgwụgwọ ọzọ maka ụmụaka nwere ADHD na Russia. ADHD bu onodu ohuru ohuru nke nwere ike ikwuputa uzo dopamine, Semax egosila na ya nyere aka n'okwu banyere nsogbu a.
2. Na-egbochi mmebi Oxidative
Na mbụ, e mere Semax iji nyere ndị nkụchi obi na ndị ọria ọnya gburu. Kemgbe ọtụtụ afọ, ọgwụ bara uru n'ịchịkwa na igbochi mmebi nke oxidative. Oxidative mmebi na-eme n'ihi nrụgide oxidative, nke bụ enweghị atụ nke radicals na antioxidants na ahụ gị. Nrụgide dị nro na-esite na mmega ahụ na-enyekwa aka n'ịhazi uto anụ ahụ ka ọ na-akpali mmepụta nke antioxidant.
Agbanyeghị, nrụgide ara ehi ogologo oge nke ọrịa ma ọ bụ ọnọdụ dị ka ọrịa strok na-ebute mmebi protein, mkpụrụ ndụ ahu na DNA. Dabere na Ọmụmụ Semax, Nsonye nke ọgwụ na ọgwụ ọrịa strok enweela mmetụta dị ukwuu na iweghachi ọnụego nke ọrụ akwara mebiri emebi. Mmetụta a na - enyere ndị ọrịa strok aka izere nsogbu ọgba aghara, n'ụbụrụ na nlezianya.
3. Na-enyere aka belata nchekasị
Nchegbu nwere ike ịbụ n'ihi ọtụtụ ọnọdụ dịka ọrịa, enweghị ụra, ma ọ bụ mmerụ ahụ. Ahụ mmadụ dị iche, ya mere, ha na-emeghachi omume na nrụgide dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ahụ ụfọdụ ndị mmadụ na-anabata nrụgide site na ịba ụba enzymes imeju. Nnyocha e mere egosiwo nke ahụ Semax maka ịda mba belata imeju enzyme imeju mgbe enyere anụmanụ aka n'oge nyocha ahụike. N’aka nke ọzọ, ndị ọrụ ahụike ekwuola na Semax na-edozigharị mgbanwe anụ ahụ nke na-esite na nchekasị nke mmerụ ahụ.
4. Na-eme ka mgbasawanye ọbara
Ihe kachasị dị ize ndụ nke ọrịa strok bụ enweghị ọbara ma ọ bụ adịghị ike mgbasa ụbụrụ na ụbụrụ, ọnọdụ a maara dị ka ụkọ nke ụbụrụ. Ojiji nke Semax na ọgwụgwọ strok ezipụtala nsonaazụ dị mma site na iwelie mgbasa ọbara n'ọbara. Ọgwụ a nwekwara mmetụta iji gbochie obi gị ịba ụba mgbe ịnwere ọbara mgbali elu. N'aka nke ya, nke a na - echebe gị ibute nkụda obi ọ bụla, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na nkụda mmụọ dị gị nso.
5.Cọpụtara Factor Brauro-weghaara Furoor (BDNF)
BDNF na-arụ ọrụ dị mkpa na nlanarị neurons, mmepe ọgụgụ isi, yana plastik nke synapses. Ọnụọgụ BDNF dị ala nwere ike ibute nkụda mmụọ na nchekasị. Dị ka ọ na-ekpughere gị obere nsonaazụ mmetụta, Semax egosipụtakwala na ọ bụ ezigbo BDFN nkwalite na ọgwụ mgbochi. Ọgwụ nwere ike imeziwanye mmepụta BDNF zụta nke 800%.
Site na ịba ụba mmepụta BDNF, Semax na-enyere aka n'ịchịkwa na ịkwụsịlata nchegbu na nkụda mmụọ. Ọmụmụ ọgwụ ahụike gosipụtara etu ogo BDNF dị elu si enwe ọfụma n'ibelata nkụda mmụọ. Semax na-akpali ndị na-anabata ndị na-anabata usoro limbic imepụta adenosine, dopamine, serotonin, na histamine, nke na-enyere aka na easi
ng mgbaàmà ndị metụtara ADH, nchegbu, na ịda mba. Mmụba nke ndị a neurotransmitters ndị a niile na-akwalite mkpali, si otú a na-eme ka elekwasị anya na imepụta ihe anya.
6. Semax nwere ike inye aka belata ihe mgbu
Mgbe ị na-enwe ụfọdụ ihe mgbu, ụbụrụ gị ga-ahapụpụtakarị neurotransmitters ndị a maara dị ka enkephalins, nke na-akụda mmụọ mgbu. Ọ na - agbanwekwa echiche mgbu site na ibelata mmetụta ụjọ na - eme mgbe ị na - enwe ihe mgbu.
Enkephalins nwere ike ịchịkwa ihe mgbu anụ ahụ nwa oge; ya mere, Semax na - enyere aka site na igbochi nbibi ya na iwusi mmeputa ya. Yabụ, na - enyere aka belata ihe mgbu n'ime ahụ gị ogologo oge na nke a na - eme Semax ka ọ nwee ike ịkwụsị ihe mgbu.
7. Semax na - eme ka njigide ncheta dịkwuo mma
Neurotransmitters dị ka enkephalins nwere mmetụta na nghọta, ma mgbe ịba ụba, ha na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịmepụta ncheta na nhazi ọnọdụ. Emere nnyocha banyere ọgwụ na Russia, na ndị ọrụ nwere ezi ahụike, Semax ntụ ntụ mekwuru ka uche ha dịrị na ebe nchekwa. Ọmụmụ sayensị na-egosi na ịkwalite mgbasa ọbara nke ọma na nchebe oxidative na ụbụrụ mmadụ na-eme ka ebe nchekwa dịkwuo mma.
Mmụba nke ọkwa BDNF dị na hippoftọsis kwukwara na ọ dị mkpa iji meziwanye ncheta n'ihi na hippocampus bụ etiti nke ụbụrụ maka mmetụta na ncheta. N’aka nke ọzọ, BDNF na-enyekwa aka n'ịkwalite ncheta, ebe nchekwa, na ikike ịmụ na ijigide ozi ọhụụ. BDNF na-akpali mmepụta nke Neurogenesis, nke bụ ọgbọ nke akwara ụzọ na ụbụrụ na-enyere aka melite ọrụ ụbụrụ na nhazi.
Semax bụ ihe nootropic na ọgwụ mgbe ejiri ya maka ọnọdụ ahụike dị iche iche. Ozugbo ọ batara n’usoro ahụ gị, Semax na-abawanye ihe ndị na-ebute ụbụrụ (BDNF) ụbụrụ na arụmọrụ.
Nka sayensi, BDNF bu protein ndi n’eme ka ahuike ụbara site n’ichebe na ime ka ụbụrụ ụbụrụ gị na-abawanye uru, ịkwalite uto mkpụrụ ndụ ụbụrụ, na ịkwalite ụbụrụ niile. Ọtụtụ mgbe, nootropic ọ bụla na-abawanye ọkwa BDNF na-eme ka cognition nwee ọtụtụ ndị ọrụ, Semax egosipụtakwala ịbụ ihe atụ zuru oke nke ike BDNF ike.
N'ọnọdụ ụfọdụ, a na-eji ngwongwo Semax aka iji mee ka ọnọdụ dị ka ọgwụ ike. Nke ahụ bụ n'ihi na ọ na-emekwa ka ọrụ dopamine na serotonin dịkwuo n'ahụ gị, nke bụ neurotransmitters nwere nnukwu mmetụta na ụjọ na ịda mba. N'ime afọ ndị gafeworonụ, ndị ọgwụ gara n'ihu na-achọpụta ọnọdụ ahụike dị iche iche nwere ike ịkọwa Semax.
Usoro ọgwụgwọ Semax na-adabere n'ọnọdụ ahụike dị n'okpuru ọgwụgwọ, onye ọkachamara ahụike kwesịrị ịhazi dose ahụ. Ndị a tụrụ aro Usoro ọgwụgwọ Semax sitere na 300mcg ruo 600mcg. Agbanyeghị, a na-adụ ndị ọrụ ọhụụ ume ka ha malite site na iji ọgwụ dị ala, nke dọkịta nwere ike idozi ya ka emesịrị mgbe ị nyochachara azịza ahụ gị na ọgwụ ahụ.
Drugsụ ọgwụ ike, ọ nweghị onye kwesịrị itinye oke ọnụọgụ ọgwụ maka mmalite n'ihi na ọ nwere ike ibute nsonaazụ ọjọọ. Iji zere ihe egwu ọ bụla metụtara ọgwụ a dịka ntutu ntutu Semax ọ bụ ezigbo echiche ịga maka nyocha ahụike tupu iwere ọgwụ a maka ebumnuche ọ bụla.
A na-ejikarị Semax intranasally, ị ga-ewere naanị 2 ma ọ bụ 3 obere ọdịda n'ime oghere ọ bụla abụọ ma ọ bụ ugboro atọ kwa ụbọchị maka okirikiri dọkịta gị setịpụrụ. Conditionsfọdụ ọnọdụ dịka mgbe ị na-ewere Semax maka oge mgbake mgbe ọgwụgwọ gasịrị, ịkwesịrị iwere 4 tụlee ọ bụla imi, ugboro isii kwa ụbọchị. Maka ncheta Narcosis ma ọ bụ nsogbu nlebara anya, usoro a tụrụ aro ya bụ usoro 3 na-erugharị n'imi ọ bụla ugboro atọ n'ụbọchị. Semax maka nkụda mmụọ 2 na 3 na-agbada n'imi ọ bụla, ugboro atọ n'ụbọchị bụ ọgwụ a na-atụ aro.
Kwesịrị, na Usoro ọgwụgwọ ọgwụ Smax ga-adabere na ọnọdụ ahụike na-achọ ọgwụgwọ. Agbanyeghị, na-agbaso ntuziaka dọkịta si a asụ ka ọgwụ ndị nrụpụta nwere ike ọ gaghị arụrụ gị. Usersfọdụ ndị ọrụ nwere ike nweta nsonaazụ dị mma mgbe ha takingụsịrị obere ọgwụ, ebe ndị ọzọ ga-agbaso usoro ọgwụgwọ dị elu iji nweta nsonaazụ ha chọrọ. Nke ahụ bụ ihe dị mma ebe ọ bụ na ike mmadụ nwere otu dị iche na nke ọzọ.
A nwekwara ike inye Semax site na ntụtụ, nke nwere ike ịbụ usoro ọgwụgwọ kachasị mma maka ndị ọrụ na-enwe mmerụ ahụ na gọzie gị n'imi. A na-eji ntanetị ọgwụ Semax Nasal na mpempe ọgwụ incutaneous maka otu ụdị naanị na ha dị iche na ngwa ha.
Dọkịta gị nwere ike ịgwa gị ka ị họrọ otu usoro onunu ogwu n’etiti mmadụ abụọ ahụ. Ọtụtụ mgbe, usoro ọgwụ ntụtụ dị ike ma e jiri ya tụnyere ụdị Semax ọ bụla. Yabụ ikwesighi ị theara ya mmiri mgbe niile dị ka imi imi nke ị ga-emerịrị ugboro abụọ ma ọ bụ atọ kwa ụbọchị ma ọ bụ karịa.
b) mamuta ogwu ogwu Semax
Dị ka Isi iyi Semax na - enye usoro dị mma maka usoro nke imu ma ọ bụ n'imi gị, na - elele mgbe niile inwetara injections site na dọkịta gị. Ọnọdụ dị iche iche na-akpọ usoro ọgwụgwọ. Nyocha ahụike ga-eduzi ọgwụ gị iji setịpụ ọgwụ ịchọrọ maka gị. Usoro ọgwụgwọ Semax kwesịrị ịdị n'etiti 300mcg ruo 600mcg.
Usoro ogwu nwere ike belata ozo dabere n’otito ahu gi si emeghachi omume na dosageor Semax nke mbu oburu meeghari elu. Ọ bụrụ na ị jighị n'aka banyere ịgbanye onwe gị, ịnwere ike ịrịọ dọkịta gị ka ọ zụọ gị ma ọ bụ tọọ oge maka nleta oge ị na-a yourụ ọgwụ. Ekwela ka isi gi tinye onwe gi ma oburu na imaghi etu esi eme ya dika o puru ibute nsogbu ahuike ogwu ndi ozo.
Semax abụghị ọgwụ a ma ama na United States of America n'ihi na FDA akwadoghị ya kemgbe etolitere ya. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ nnyocha na ọnwụnwa emere na Russia nke na-egosi arụmọrụ Semax.
Ogwu ahu egosiputala na nyocha ogwu di iche-iche n’ebe umu mmadu no, ma ihe nlere anya nile anaghi ekwuputa ochoghi nsogbu Semax di. Nke ahụ na-eme Semax ka ọ bụrụ nke kacha mma nootropic n'ahịa taa. Na Russia, Semax abaarala uru n'ịgwọ ọrịa ọnọdụ dị iche iche dịka isi ọwụwa migraine, ọnya afọ, na nsogbu nke ọgụgụ isi.
Akụkụ kachasị ịtụnanya banyere ọgwụ a bụ na enwere ikike dị elu, mana ọbụlagodi mgbe a na-a doụ nnukwu ọgwụ, enwere ike ọ gaghị abụrụ nsị nye anụ ahụ gị. Agbanyeghị, ọtụtụ ndị mmadụ ejighị Semax jee ruo Russia n'oge na-adịbeghị anya mgbe Ukraine kwadoro ojiji ojiji. Nkwekorita nnabata ahu gi nwekwara ike ikpebi, ihe Semax gha enweta n’iru gi mgbe ị theuru ogwu.
Minorfọdụ ndị ọrụ Semax ekwupụtala maka obere mmetụta Semax dịka ọnụ akọrọ, ịsụsọ dị elu, ọgbụgbọ na ura. Semax na ntutu isi bụkwa ihe ọzọ na-emetụtakarị mmetụta nke ụfọdụ ndị ọrụ Semax kwuru. A naghị akọkarị mmetụta ndị a niile, mana ọgwụ nwere ike ijikwa ha. Ahụ mmadụ dị iche, ma ọ bụrụ na ị na-enwekarị mmetụta Semax ọ bụla ọzọ siri ike gwa dọkịta gị ozugbo maka enyemaka.
Dị ka ọ na-adịkarị, Semax na-enye nsonaazụ dị mma mgbe ejiri ya naanị maka ọgwụgwọ nke ọnọdụ ahụike dị iche iche. Agbanyeghị, dị ka ọtụtụ nootropics, ị ga - enweta ike kachasị nke Semax mgbe ị were ya na akpa. Kratom, nke bụkwa nootropic ọzọ a ma ama na ahịa ejiri mee ọgwụ na-akpali ma na-akpali, na-eme ka ọmarịcha Semax dị mma. Dịka Semax nwere ike izu ike ma mee ka onye ọrụ nwee ume, were Kratom were ya na-akwalite mmetụta a chọrọ.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ịtụle iji dobe Semax na Phenylpiracetam n'ihi nrụgide ike nke enwere ike ibute site n'iwere ọgwụ a. Phenylpiracetam bụ ezigbo cognition-akwalite nootropic mana ọ na-eme nwayọ. N’aka nke ozo, otutu ndi oru achoputala inweta uru Semax di egwu mgbe ha na agwakọta ya na ihe ndi ozo dika curcumin nke n’eme ka otutu nkpuru ike n’ahu.
Maka ndị ọrụ Semax nwerela oke nchegbu kwesịrị ịtụle ijikọta ọgwụ na Ashwagandha, nke na-arụ ọrụ dị ka izu ike. Ashwagandha nwere ike Nootropic nke nwere ike inye aka mee ka obi jụrụ nkụtụ Semax.
Na mkpokọta, enwere ike ijikwa Semax nwere nootropics dị iche iche iji bulie nsonaazụ ndị ị tụrụ anya ya. Agbanyeghị, ọ bụrụ n ’ejighi n’aka banyere nootropic ịjikọ ya na Semax, kpọtụrụ dọkịta gị oge niile. Idochi ihe n'ụzọ na-ezighi ezi dị oke mma maka ahụike gị n'ihi na ọ nwere ike ibute nsonaazụ dị egwu.
Semax na Selank bụ ndị nootropics mepụtara na Russia, mgbe ụfọdụ, a na-eji ha agwọ ọnọdụ ọnọdụ ahụike dịka nsogbu mmezi na nchekasị. Maka nsonaazụ kachasị, ọgwụ abụọ ahụ nwekwara ike ijikọ ọnụ. Selank bụ peptide anxiolytic nke na-ebelata oke mmetụta nke nrụgide ma mara maka enweghị akpata mmetụta ọ bụla dị njọ dịka Semax.
Site n'ụzọ, Selank sitere na endogenous tetrapeptide Tuftsin, nke na-arụ ọrụ dị mkpa na usoro ahụ gị na - alụso ọrịa ọgụ. Iji mee ka mmetụta Selank dịkwuo ogologo ma kwụsịlata peptide ndakpọ, ndị rụpụtara gụnyere Glyproline na nhazi ya.
Ofdị nke Selank edinam na ụbụrụ dịkwa iche iche; ọ na - arụ ọrụ dị ka ọgwụ mgbochi nchekasị na mgbakwunye mgbochi asthenic na antidepressant nke na - eme ka ọgụgụ isi na ọrụ ncheta dịkwuo mma. Ya mere, Semax vs Selank nwere ike ikwu nka, mana ogwu abuo bu ihe ndi n’echeputa ihe. A na-achịkwa Selank na intranasally, usoro ọgwụgwọ ahụ nwere ike ịdị iche na-adabere na ọnọdụ dị n'okpuru ọgwụ.
Ọgwụ abụọ ahụ dịgasị iche na otu esi eji ha agwọ ọrịa dị iche iche. Semax nwere ikike imeziwanye cognition na nkụda mmụọ, ebe Selank na-eweta nsonaazụ mma mgbe ejiri ya dịka nchekasị. Agbanyeghị, ọgwụ abụọ ahụ na-abawanye ọkwa BDNF, mgbe ụfọdụ enwere ike ịhazi ha ọnụ, dị ka anyị kwuru na mbụ. Maka inweta nkọwa ndi ozo banyere Semax vs Selank, gakwuru onye okachamara.
Ọ bụrụ na ịnọ na Russia, a na-ere Semax n'okpuru ọgwụ dọkịta. Agbanyeghị, na United States of America, iwu akwadoghị ọgwụ a, ọ bụ ezie na FDA akwadoghị ya. Nke ahụ pụtara na ị nwere ike ịnweta ya site na ụlọ ahịa nootropic n'ịntanetị. Anyị na-adụ ndị ọrụ Semax ọdụ ka ha kpachara anya ma were oge ha iji nweta ndị ahịa Semax kacha mma. Mee nyocha gị, lelee nyocha ndị ahịa iji ghọta otú ndị na-eweta Semax si arụ ọrụ tupu ịme usoro gị. Cheta, obughi ndi ahia mgbere ahia Semax obula a huru n’ahịa ka atukwasiri obi.
Ozi ọma ahụ bụ na anyị bụ ndị na - eduga ndị ahịa Semax na mpaghara. Nwere ike ime iwu gị na weebụsaịtị anyị wee jide n'aka na ị ga-anata ngwaahịa gị n'ime ntakịrị ntakịrị oge enwere ike. Semax maka ọrịre na ngwongwo Semax bụcha nke dị na ụlọ ahịa anyị na-ahụ maka ịntanetị anyị.
Anyị bụ nlekọta Ndị na-eweta ntụ ntụ Semax, yabụ, anyị na-akpachara anya na ndị ahịa anyị niile na-akwanyere ùgwù ịghara ị ourụ ọgwụ ọjọọ anyị n'emeghị nyocha ahụike ma ọ bụ tinye aka ọkachamara na usoro ahụ dum. Ọzọkwa, gwa dọkịta gị ozugbo na ị ga-enwe mmetụta ọ bụla dị oke njọ.
Dolotov, OV, Eremin, KO, Andreeva, LA, Novosadova, EV, Raevskii, KS, Myasoedov, NF, & Grivennikov, IA (2015). Semax na - egbochi ọnwụ nke ndị ihe na - eme ihe n'ahụ nke ọdịdọ neuroplial na - arụkọtara ọnụ sitere na ụdị mesorophalon nke nwa ẹmbrayo nke usoro 6-hydroxydopamine. Journal Neurochemical, 9(4), 295-298.
Koroleva, SV, & Myasoedov, NF (2018). Semax dị ka ọgwụ ọgwụ zuru ụwa ọnụ maka ọgwụgwọ na nyocha. Bulletin Bayoloji, 45(6), 589-600.
Manchenko, DM, Glazova, N., Levitskaia, NG, Andreeva, LA, Kamenskiĭ, AA, & Miasoedov, NF (2010). Nootropic na nyocha nke Semax na-eso ụzọ nchịkwa dị iche iche. Rossiiskii fiziologicheskii zhurnal imeni IM Sechenova, 96(10), 1014-1023.
Malyshev, AV, Razumkina, EV, Dubynin, VA, & Myasoedov, NF (2013, May). Semax na-agbazi dysfunction ụbụrụ nke mbido prenatal nke valproic acid. Na Doklady Biological Sciences (Mpịakọta 450, Nke 1, p. 126). Sayensị Scienceer na Business.